तपाईं कुन ‘वाद’मा विश्वास गर्नुहुन्छ ? यस्ता छन् १७ ‘वाद’का अर्थ
Saturday, 17 Mar, 2018 1:10 PM
हरेक राजनीतिक दल र व्यक्तिले आफूलाई कुनै न कुनै वादसँग जोडेका हुन्छन् । वाद आस्था र विश्वास हो । अर्को अर्थमा यो सिद्वान्त, प्रणाली र प्रयोग पनि हो । वादले नै समाजलाई कुनै निश्चित दिशातर्फ डो¥याएको हुन्छ । तर, समाजले, व्यक्तिले अंगालेका वाद आफैँमा पूर्ण र स्थायी हुँदैनन् । मानिसको आवश्यकता, चाहना र परिवेशले नयाँ–नयाँ वादलाई जन्म दिइरहेको हुन्छ । विशेष गरेर राजनीतिक विचार, आन्दोलन र प्रणालीले वादको सृजना गर्नमा अहम् भूमिका खेलिरहेका हुन्छ । कुन वादको अर्थ के ? जानिराख्नुहोस् :
प्रजातान्त्रिक समाजवाद : प्रजातान्त्रिक शासन पद्वतिमा आधारित सरकारले समता र सामाजिक न्यायका आधारमा आर्थिक कार्यक्रम अबलम्बन गर्नुलाई प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनिन्छ । पूँजीवाद र साम्यवादको विकल्पको रुपमा यो वाद अगाडि आएको देखिन्छ ।
पूँजीवाद : राज्यको हस्तक्षेप बिना उत्पादनका साधनहरु व्यक्तिले परिचालन गर्न पाउने राजनैतिक विचारधारा र यसको आर्थिक पक्षलाई पूँजीवाद भनिन्छ । यहाँ राज्यको अधिकतम् साधन सीमित वर्गका हातमा रहन्छ ।
राष्ट्रवाद : राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी ठानी शासन गर्ने मतलाई राष्ट्रवाद भनिन्छ । राष्ट्रवाद राष्ट्रप्रति देखाउने भक्तिभाव पनि हो ।
समाजवाद : उत्पादनका साधनहरु समाजको सर्वोपरी हितका लागि प्रयोग गर्दै आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक समानता अनुरुप राज्य संचालन गर्ने पद्वतिलाई समाजवाद भनिन्छ । पूँजीवादविरुद्व स्थापित भएको यस वादले साम्यवादका असल पक्षलाई पनि लिएको छ ।
अधिनायकवाद : निरंकुश अधिकारको प्रयोग गरी भौतिक शक्तिका आडमा दमन र अत्याचारपूर्वक गरिने शासनलाई अधिनायकवाद भनिन्छ । नेपालमा राणा शासन र पंचायत व्यवस्थालाई अधिनायकवादी व्यवस्थाको रुपमा लिन सकिन्छ ।
अराजकतावाद : राज्यव्यवस्था र सरकार बिना पनि समाजलाई संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्वान्तलाई अराजकतावाद भनिन्छ । राज्यद्वारा गरिने अन्याय र अत्याचारको विरुद्वमा यस वादको उत्पत्ति भएको मानिन्छ ।
उदारवाद : चरम वामपन्थी र चरम दक्षिणपन्थीको अलावा मध्यमार्गी राजनीतिक विचारधारालाई उदारवाद भनिन्छ । यहाँ पूँजीवाद र साम्यवादका असल पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरिएको हुन्छ ।
उपनिवेशवाद : सैनिक, राजनैतिक र आर्थिक प्रभावद्वारा शक्तिशाली राष्ट्रले कमजोर राष्ट्रमाथि राज्यसत्ता कब्जा गरी आफ्नै विचारधाराद्वारा शासन व्यवस्था चलाउनेलाई उपनिवेशवाद भनिन्छ । द्वितिय विश्वयुद्वपछि उपनिवेशवाद क्रमशः अस्ताउँदै गएको छ ।
गान्धीवाद : अहिंसा, सत्य र सहिष्णुताको आधारमा राज्यसत्ताको संचालन गर्ने विचारधारालाई गान्धीवाद भनिन्छ । हिन्दुस्तानका पिता महात्मा गान्धीद्वारा यस वादको प्रार्दुभाव भएको हो ।
नाजीवाद : सैनिक बलका आधारमा विश्वभर अधिनायकत्व कायम गर्ने सिद्वान्त नाजीवाद हो । तानाशाह हिटलरका अनुयायीहरु यस वादलाई आफ्नो मुख्य लक्ष्य ठान्छन् ।
द्वन्दात्मक भौतिकवाद : चेतनाको सृष्टि पदार्थबाट भएको मान्ने र सवै पदार्थलाई परिवर्तनशील र प्रगतिशील मान्ने मतलाई द्वन्दात्मक भौतिकवाद भनिन्छ । माक्र्सद्वारा प्रतिपादित यस वादमा पदार्थलाई प्रमुख र चेतनालाई गौण रुपमा लिइएको छ ।
साम्यवाद : समाजमा आर्थिक विषमता र शोषण हटाउन पूँजीलाई राष्ट्रियकरण गरी सर्वहाराका नाउँमा गरिने शासनलाई साम्यवाद भनिन्छ । साम्यवाद कार्ल माक्र्सद्वारा प्रतिपादित द्वन्दात्मक भौतिकवादमा आधारित सिद्वान्त हो ।
साम्राज्यवाद : कमजोर राष्ट्रलाई शक्ति राष्ट्रद्वारा ती राष्ट्रहरुको सार्वभौमसत्तामाथि नियन्त्रण गर्दै राज्यसत्ता विस्तार गर्नुलाई साम्राज्यवाद भनिन्छ । उपनिवेशवादसँगै यो पनि द्वितिय विश्वयुद्वपछि पलायन हुँदै गएको छ ।
सामन्तवाद : राज्यशक्तिको आडमा सीमितवर्गले सर्वसाधारणमाथि गर्ने आर्थिक एवं शोषणयुक्त शासन व्यवस्थालाई सामन्तवाद भनिन्छ । प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा यसको कुनै स्थान हुँदैन ।
मानवतावाद : मानिसले मानिसलाई शासक र शासित रुपमा व्यवहार नगरी मानवीय मूल्य र आर्दशलाई व्यवहार केन्द्रीत गरिनु पर्ने मतलाई मानवतावाद भनिन्छ । यस वादले मानवीय आध्यात्मिक पक्षलाई विशेष जोड दिएको हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रवाद : कुनै राष्ट्र वा परिधि विशेषको सीमा नराखी पूरै मानवलाई एकै विश्व समाजमा संगठित गर्दै उन्नति र आचरणमा लाग्ने मतलाई अन्तर्राष्ट्रवाद भनिन्छ । यस वादले भौगोलिक सीमाभन्दा मानव आवश्यकता र समग्रतालाई समेट्ने प्रयास गर्दछ ।
आतंकवाद : मानवमाथि डर, त्रास र धम्कीकै भरमा प्रभुत्व स्थापना गरी शासन गर्ने लक्ष्यलाई आतंकवाद भनिन्छ । आतंकवादीहरु आफ्नो कार्य सिद्विका लागि साम, दाम, दण्ड, भेदका कुनै पनि नीति प्रयोग गर्न पछि पर्दैनन् ।